များစွာသော Apples များ
အကောင့်ဖွင့်ပါ ပါတနာတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ ၀င်ရောက်ပါ။
English Portuguese Spanish အာရှတိုကျ
Korean Lao Thai Turkish Urdu Vietnamese ပင်မPromotions and contestsSwap Free	Swap Free
အရောင်းအဝယ်တွင် တစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပြီး Swap Free အကောင့်ကိုအသက်သွင်းလိုက်ပါ။
Swap free ကို Activate လုပ်ရန်
အကောင့်အမျိုးအစားအားလုံးတွင်သုံးနိုင်သည်။	ရက်ကျော်ကြေး မပေးချင်သော ဖာက်သည်များအတွက် သတင်းကောင်း!
FBS ၏ ရက်ကျော်ကြေး(ညသိပ်ခ) အခမဲ့ အစီအစဉ်!
ဒီအစီအစဉ်ဟာ အပိုကြေးများကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ပြီး သင်ရောင်းရောင်း၊ ဝယ်ဝယ် ရက်ကျော်ကြေး ဟာအမြဲ သုညဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ရေရှည်ရောင်းဝယ်ခြင်း ဗျုဟာများကို အရိုးရှင်းဆုံး အထမြောက်အောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရက်ကျော်ကြေး အခမဲ့ အကောင့်ဆိုတာ ရက်ကျော်ကြေး နေ့စဉ်မပေးဆောင်ရသည့် အကောင့် (အပေါင်း သို့မဟုတ် အနှုတ်)ဟု ညွှန်းဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖောက်သည် သည် မည့်သည့် အပိုဝင်ငွေမှရရှိခြင်းမရှိသလို အနှုတ်လက္ခဏာပြခြင်းမှလည်း ကင်းဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရက်ကျော်ကြေးဆိုတာ အော်ဒါများကို တစ်ရက်ထက်ကျော်၍ထားခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခဖြစ်ပါတယ်။
သင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် ငွေကြေးများ၏ နိုင်ငံများမှ ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းများပေါ် အခြေခံပြီးတွက်ချက်ပါတယ်။
သင် ယူရို-ဒေါ်လာငွေကြေးကို အရောင်းအဝယ်လုပ်လျှင် သင်ဟာ ယူရိုငွေကိုဝယ်ရန်အတွက် ဒေါ်လာကို ချေးယူတာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းဟာ ၁.၅% ဖြစ်ပြီး ယူရို ဗဟိုဘဏ် အပ်ငွေအတိုးနှုန်းဟာ ၀.၅% ဆိုပါစို့။
အကယ်၍ သင်ဟာ အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်မှ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ချေးယူပြီး ယူရို ဗဟိုဘဏ်မှာ ပေါင် ၉၅၀၀၀ အပ်နှံမယ်ဆိုရင် သင့် transaction တစ်ခုတိုင်းအတွက် တစ်ရက်ကျော်လျှင် အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ကို ၁.၅% အတိုးပေးရမှာဖြစ်ပြီး ယူရိုဗဟိုဘဏ်မှ ၀.၅% ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာ အဲ့ဒီလို အတွက်အချက်အခက်အခဲများအတွက် အပေးအယူလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် <0> ရက်ကျော်ကြေး အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်အသက်သွင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရက်ကျော်ကြေးအခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းပိုမို သိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့, သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ၂၄/၅ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဖောက်သည်အသစ်များရှာဖွေပြီး iPartner ပြိုင်ပွဲမှ ပထမတန်းစား Apple ပစ္စည်းများကိုရယူလိုက်ပါ။
FBS MARKETS INC သည် Belize, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူများသို့ ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများမပေးပါ။© 2009-2016 FBS Markets Inc.FBS: Suite 5, Garden City Plaza, Mountain View Boulevard, BELMOPAN, Belize, C. A. Licence IFSC/60/292/TS/15ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအသိပေးချက် အရောင်းအဝယ်မစတင်ခင် ငွေကြေးဈေးကွက်နှင့်မာဂျင်းဖြင့်အရာင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်ဆုံးရှုံးမှုများရှိလာနိုင်သည်ကို သင်လုံးဝနားလည်သဘောပေါက်ထားရန်လိုပါသည်။ ပြီးနောက် သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအဆင့်မည်မျှရှိသည်ကိုလည်း သိထားရန်လိုပါသည်။www.fbs.comမှ အကြောင်းအရာများ၊ စာသားများ၊ ဓာတ်ပုံများအစရှိသည်တို့ကို အင်တာနက်နှင့် အခြားကိစ္စများအတွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေဖြင်း၊ ကူးယူဖော်ပြခြင်း၊ ပုံတူပွားခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြုလုပ်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။. ဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးမည်
Traders များအတွက် အရေးပါတဲ့ အချက်အလက်များနှင့် သတင်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်လိုက်ပါ: